လွမ်းဖူးပါတယ်...... အနမ်းစူးတွေကိုလဲ တမ်းတနေရတယ်...ချစ်သူ
ပိုစ့် တင်သူ ကဗျာတွေနဲ့ စီးဆင်းသူ မှ Saturday, July 01, 2017 No comments:
ပိုစ့် တင်သူ ကဗျာတွေနဲ့ စီးဆင်းသူ မှ Sunday, July 12, 2015 No comments:
ပိုစ့် တင်သူ ကဗျာတွေနဲ့ စီးဆင်းသူ မှ Saturday, June 13, 2015 No comments:
ပိုစ့် တင်သူ ကဗျာတွေနဲ့ စီးဆင်းသူ မှ Sunday, May 10, 2015 No comments:
ပိုစ့် တင်သူ ကဗျာတွေနဲ့ စီးဆင်းသူ မှ Sunday, January 04, 2015 No comments:
ပိုစ့် တင်သူ ကဗျာတွေနဲ့ စီးဆင်းသူ မှ Wednesday, August 06, 2014 No comments:
Bon Bon Lay
သံယောဇဉ် သို့ တောက်ခေါက်မြွေ
တင်ပြီးခဲ့ သောကဗျာများ Feb 05 (5) Feb 06 (3) Feb 07 (5) Feb 08 (7) Feb 10 (1) Feb 14 (12) Jun 06 (1) Jun 22 (1) Oct 17 (1) Nov 21 (1) Dec 30 (1) Jan 04 (1) Mar 10 (1) Mar 23 (1) Mar 26 (1) Mar 27 (1) Mar 28 (1) Mar 30 (1) Apr 01 (1) Apr 07 (1) Apr 11 (1) Apr 22 (1) Apr 24 (1) Apr 25 (1) May 02 (1) May 06 (1) May 16 (1) Jun 22 (1) Jun 29 (1) Jul 19 (2) Jul 20 (1) Jul 21 (1) Aug 03 (1) Aug 06 (1) Jan 04 (1) May 10 (1) Jun 13 (2) Jul 12 (1) Jul 01 (1)
MAPLE Casino forex trading platform WilliamHillCasino flag counter
ကဗျာချစ်မြတ်နိုးသူများ join this site ကိုနိုပ်၍ member ၀င်နိုင်ပါသည်
မိုးသူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်blog လေးပါ
"သူ"မလိုချင်လို့ ပစ်လိုက်တဲ့ပန်း ငါ့ ရင်ထဲမှာ မနွမ်းစေရဘူး ငါ့အချစ်ကြောင့် လန်းဆန်းစေရမယ် "သူ"မုန်းလိုက်တဲ့ပန်း ...
မင်းရင်ထဲမှာ "သူ" ဆိုတာရှိနေသရွေ့ "ငါ" ဆိုတာ အဝေးဆုံးပေါ့ မင်းအတွက် "သူ" ဟာအချစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ ငါ့အတွက် &q...
အပြစ်တွေမမြင်ပဲ ချစ်ကြင်ခဲ့ရတာပါကွယ် ယခင့် ယခင်နှစ်တွေကလို မအိုနိုင်တဲ့သံယောဇဉ်ကြိုး နင့်အမြင်မှာလူဆိုးဖြစ်ခဲ့သလားကွဲ့အယူမရိုးတဲ့သစ္စ...
ချစ်သူ နဲ့ ရည်းစား ခွဲခြားပေးပါ
ချစ်သူနဲ့ ရည်းစား ခွဲခြားပေးပါ မနက်ဖြန်များစွာ ရှိနေသမျှ ရည်းစားဆိုတာ ထားလို့ ရပါတယ် ရင်မှာတောင့်တ လိုလားမှုနဲ့ဖြည့်ဆည်းရတဲ့သူဆိုရင...
ချစ်သူ................ မင်းကလွဲရင် ငါဘာကိုမှ မမြင်နိုင်ဘူး မင်းအသံကလွဲရင် ငါဘာသံမှ မကြားမိဘူး မင်းလက်ကလွဲရင် ငါဘယ်သူ့လက်မှ မတွဲဘူး...
ရူးသွပ်ခြင်းတစ်ခုအတွက် နှလုံးသားကိုပေးဆပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ငါ့ရင်ကွဲ ခံရဲပါတယ် လွမ်းဆွတ်ခြင်းတစ်ခုအတွက် မျက်ရည်တွေကိုပေးဆပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်း...
We are one of Top Fabricators in Delhi and NCR . Leveraging to the vast experience, NEW KALKAJI STEEL has marked its distinctive ...
ချစ်ခြင်းငယ်ပြိုင် ဘယ်သူနိုင်ပါ့မလဲကွယ် တွယ်ရာမဲ့ ရင်ခွင် မှာ တော့ ဘယ်လို ပဲ စိမ်းစိမ်း ဘယ်လို ပဲ တိမ်းတိမ်း ယိမ်း နွဲ့ ကာ နှောင်ရစ်လိုက်...
I've been using Google Talk and thought you might like to try it out. We can use it to call each other for free over the internet. Here...
ငါ့ရဲ့ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံး ချာချာလည်သွားရသလိုပဲ ရုတ်တရက်ချင်းကို ရင်ခွင်တစ်ခုလုံး ဆို့နင့်ကြေကွဲခြင်းတွေက စကားလေးတစ်ခွန်း ပြောနိုင်ဖို...
First April Poems
လာရောက်လည်ပတ်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...ကဗျာများဖြင့်စီးဆင်းသူများအဖွဲ့ 
gmail မှ တဆင့် email ပို့ ပြီးတင်ချင်သူများအတွက်လိပ်စာ ကတော့
ကို email ပို့ ၍တင်နိုင်ပါသည် လို အပ်သလို
edit ကို admin များလုပ်ပေးပါမည်ကဗျာစာသားများကိုတော့
selectlove@gmail.com သို့ အတ်၍မေးမြန်နိုင်ပါသည်...
ကဗျာတွေကို ခံစားဖတ်ရှုပေးတဲ့ မိတ်ဆွေတို့ အားအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.......... Awesome Inc. theme. Theme images by andynwt. Powered by Blogger.